Ukutya okunempilo kwi-Go-Galveston County Food Bank
Ukutya okusempilweni ekuhambeni
admin Aprili 25, 2019 0 Comment Imfundo yezondlo
Esinye sezikhalazo eziphambili esiva ngazo xa usiya kutya kukuba ayiphilanga; oko kunokuba yinyani, kodwa kukho ukhetho olusempilweni apho!
Ukuba uphumile ngaphandle kokutya okutyiwa kwangaphambili, kukho ezinye iindlela ezilungileyo ngaphandle kwesaladi.
Oku kukutshintsha okulula okungenza nasiphi na isidlo sibe sempilweni encinci:
1. Guqula inkukhu eqhotsiweyo yenkukhu egcadiweyo.
2. Ukulayisha kwimifuno kunye neziqhamo! Ukuba akukho nasiphi na isitya sakho esithile, bacele.
3. Khetha izinto ezibhakiweyo kunezizosiweyo.
4. Khetha amanzi, iti engenaswiti, ubisi, okanye ijusi eyi-100% njengesiselo sakho.
5. Cela iisosi ecaleni.
6. Endaweni yeefries, cela izilayi ze-apile, isaladi esecaleni, iyogathi, okanye into efanayo.
7. Khetha izinto ezenziwe ngeenkozo ezipheleleyo, ukuba ziyafumaneka.
8. Ukuba awuqinisekanga ngento oza kuyikhetha, jonga ulwazi lwekhalori kunye nesodiyam.
9. Ukuba uyathandabuza, bamba isaladi ngeziqhamo ezithile.
Ukuba unayo ixesha lokucwangcisa ixesha lakho ngaphandle kwendlu okanye uhambo lwendlela olichithe emotweni, Nazi ezinye iindlela ezinempilo onokuzipakisha ukuze ube nazo. Thatha nje isikhongozeli kwaye uhambe. Ezi zokutya okulula zilayishwe ngezondlo; protein, ifayibha, kunye neevithamini. Iinkozo ezipheleleyo zihlala zikhetha bhetele ngaphezulu kweenkozo ezicwangcisiweyo kwaye ziya kukunika amandla amaninzi. Zama ukunqanda izinto ezenziweyo okanye amashwamshwam aneswekile eninzi.
Izinto ezishelfini ezizinzileyo:Beka izinto ezingxoweni ezizodwa okanye izikhongozeli ezincinci ukuze kube lula.
2. Isiqhamo esomileyo
3. Iibhola zeGranola okanye zegranola
4. Abaqashi / iichips ezipheleleyo
5. Ibhotolo yamandongomane okanye enye inut kwisonka okanye iziqhekezi
Izinto ezifrijiweyo:Beka izinto ezingxoweni ezizodwa okanye izikhongozeli ezincinci ukuze kube lula.
1. Iityhubhu zesonka samasi
2. Iityhubhu zaseTurkey okanye inkukhu eyosiweyo
3. Iidiliya okanye nayiphi na enye into elula yokubamba iziqhamo ezinje ngamaqunube
4. Imifuno (imicu yentsimbi, iseleri, iminqathe, iitumato zetsheri)
5. Iityhubhu zeyogathi ezisezantsi kwiswekile
6. Izikhwama zeapile zesauce ezingaswiti
Zonke ezi zinto zinokudityaniswa ukulungiselela abantwana nazo! Ukuba nabantwana usendleleni kwaye uzama ukupheka kunokuba noxinzelelo ukuze ugcine ezi ngcebiso engqondweni kwiintsuku zoku-odola ukutya yeyona ndlela ifanelekileyo yosapho lwakho.
-Kelley Kocurek, RD wangaphakathi
-UJade Mitchell, Utitshala weSondlo
egqithileyo ngeposi Previous: Ukufumana uninzi lweMveliso yakho kwiNtwasahlobo
Okulandelayo elilandelayo: Isikhokelo seMpilo yaBantwana